About Us - Tianjin Shengxin Sports entana Co., Ltd
Tianjin Shengxin Sports entana Co., Ltd dia naorina teo an 2011, izay manokana amin'ny fampianarana sy panamboarana an'ilay toerana fanatanjahan-tena, ary ny mpanamboatra fitaovana Fitness ivelan'ny trano, tranom-borona baolina kitra an-tsaha, tanjona maro-tokotanin-tsekoly, schoolyard fitaovana fanatanjahan-tena, ny fampianarana fitaovana, mitsangana basket, volley lahatsoratra, badminton lahatsoratra, tenisy lahatsoratra, ivelan'ny trano fiarovana sy ny fitokana-monina harato fehin-kibo. Afaka ihany koa ny mpanamboatra isan-karazany tsy fitsipika fitaovana toy ny mpanjifa 'fangatahana. Ary Shengxin no ny maha-mpikambana an'i Shina Sporting entana Federation (CSGF), Sina avoaky & Sporting entana Association (CSSGA), Sina Fanabeazana Fitaovana Industry Association (CEEIA), Tianjin Sporting Industry Association (Tsia), ary koa ny tale rafitra ny Sekoly Sporting fitaovana Sampan'i Association in CEEIA sy ny Sporting fitaovana Professional Komitin'ny in Tsia. General Manager Zhang Junyuan voafidy ho ny talen'ny eo ny Tsia.
Rehefa afaka 7 taona-dalam-pandrosoana, Shengxin Sports no ny-pahefana ao amin'ny orinasa Shinoa Fitness fitaovana Indostria. Ankehitriny, ny fahaiza-manao sy ny orinasa ao amin'ny faritra no toerana voalohany any Shina. Ny famokarana fitaovana automatique ao ny tari-dalan'ny anivon'ny ao amin'ny orinasa. Ankehitriny isika dia iray amin'ireo Top 10 orinasa izay mahazo ny NSCC taratasy sy ny tari-dalan'ny haavon'ny any Tianjin. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra NSCC dia maherin'ny 100 karazana izay eo amin'ny haavon'ny manokana eo ambony ao amin'ny mahery 40 NSCC taratasy fanamarinana orinasa
Ny haingana fampandrosoana ny fanatanjahan-tena entana orinasa manome fahafahana ho an'ny Shengxin Sports. Ny vola miditra amin'ny varotra 2017 dia efa maherin'ny 100 tapitrisa RMB. Ny orinasa Nikasa mba hanafainganana orinasa fisehon'ny, manolotra entana betsaka andian-dahatsoratra sy hampitombo ny vola miditra amin'ny varotra 2018-2020.
Efa vita tamin'ny 2018:
1.Level ny famokarana tsipika, faritra famokarana 20.000 metatra toradroa. Ny fahafahana dia afaka tonga 180.000 sekely, Output sarobidy 180 tapitrisa RMB.
2.New nanao Fitness fitaovana an-trano famokarana fototra dia afaka hahatratra 60 tapitrisa sarobidy eo Output taona voalohany.
3. Invest 3 tapitrisa RMB isan-taona mba hiara-miasa tamin'ny ekipa RD Taiwan nandroso ho an'ny hampivelatra ny andian-dahatsoratra vaovao anaty sy ivelan'ny trano famokarana Fitness, izay be orinasa hanamafy orina ny fahafahan'ny ny planina, orinasa mpamokatra entana, sy ny fanavaozana.
4.Built ny olona 20 mahery taorian'ny fanompoana-varotra ekipa mba handefa ny distributers afaka amin'ny ahiahy sy ny mpanjifa matoky.
5.Introduced mandeha ho azy manontolo enina-mpiray welding milina izay tsy tonga saina ny 360 ambaratonga welding tsy misy maty zoro sy mandeha ho azy amin'ny fihodinana. Ny automatique Mety hahatratra 100%. Koa izahay nampiditra ny mandroso fitaovana mandeha ho azy toy ny tsy manam-paharoa mandalo roa-lalamby tifitra sy ny hoso-doko mikoriana tsipika, isa fanapahana milina fanaraha-maso sodina, isa milina fanaraha-maso hiondrika sodina sy ny sisa. Ireo rehetra ireo mazava ho azy fa mandroso fitaovana hanatsara vokatra tsara sy ny famokarana fahombiazana dia ambany ao anatin'ny masonkarena.
Ary ny fitambaran'ny fampiasam-bola dia 125 tapitrisa RMB (tsy tafiditra ny tany sy ny atrikasa trano). Ny raikitra fahan'ny dia 60 tapitrisa RMB, ny renivohitra amin'izao fotoana izao dia ny 65 tapitrisa RMB.
Tamin'ny taona manaraka, Voalohany, tiantsika ny hanana ny manan-tsaina vokatra amin'ny alalan'ny fikarohana na mampiditra. Tsy vitan'ny hipetraka ny ankamaroan'ny fividianana tsena, fa mahazo ny ara-dalàna ihany koa ny mpanjifa mahaliana ka miditra eo amin'ny fianakaviana ara-dalàna. Faharoa, dia te-hiditra ao amin'ny mizara toe-karena ho be dia be, ary lalina mizara ny tombony ny Fitness-pirenena politika. Fanantenana ny manosika ny Internet, rahona computing, angona lehibe, ny Internet ny zavatra sy miara-pirenena fampandrosoana Fitness, dia aoka ny teknolojia hanampiana ny firenena Fitness.
Ny telo taona dia toy ny drafitra bellows:
2018, varotra fidiram-bola 180 tapitrisa RMB, tombony 30 tapitrisa RMB;
2019, varotra fidiram-bola 300 tapitrisa RMB, tombony 50 tapitrisa RMB;
2020, varotra fidiram-bola 500 tapitrisa RMB, tombony 100 tapitrisa RMB.
Ho ao ny tari-dalan'ny anivon'ny rehefa avy fanatrarana ny lasibatra!
Tamin'ny Septambra 2017, Shengxin Sports niara-niasa tamin'ny Tianjin Youfa Steel Sodina Group, izay iray amin'ireo "Top 500 Enterprises Shinoa" 12 taona mahery, fananganana ny vaovao Sports Shengxin miara-. Ny fiaraha-miasa ny orinasa Manatsara ny fanorenana orinasa vaovao, vaovao sy ny fitaovana fampidirana ny vokatra vaovao ny fampandrosoana.